Waxa hareerahaaga ka dhacaya waa kuu tusaala iyo cashar la doonayo in aad wax ka barato, yeysan kugu moodin yaab iyo naxdin ee garasho iyo dib isku xisaabin ha kuu noqoto.
2-Indhaha, Dhagaha, Qalbiga.
Saddexdaas haddii ay kaa wada lumaan ama aad kawada aradantahay hubaal in aadan waxba garan karayn.
Ku noolow xaaladdaada hadda maxaa yeelay waa iyada tan ugu saameynta badan waqtiga xusuustaada.
Qaddarta masoo dag dagto mana soo daahdo ee waqtigeeda ayey mar walba ku timaadaa.
5-Cadow iyo Caqli
In aad isku jeediso kuwa noloshaada liddiga ku ah si ay isku laayaan ama iskugu mashquulaan waa noloshaada nasiinadeeda, wax la dhaho cadow ma jiro ee waxaa jira wax la dhaho Caqli ka shaqaysiin.
Erayga “macquul maahan” waa eray uu aadanuhuu soo allifay si uu ugu marmarsiyoodo caajiskiisa Nolosha.
Haddii ay indhahaagu ku dhacaan qof dambaabayaa ha u malayn in aad ka sharaf badan tahay, laga yaabee in xikmadda ku jirtaa ay tahay in qofkaas Alle dartiis loo fidneeyey adigana naxariista alle darteed lagaaga bad baadshay dambigaas, Alle uga tuug qofkaas Hanuun.
Noloshu way is baddalaysaa, kii rabay in uu tago wuu tagayaa, shalay wax xiiso kula lahaa maantay kulam lahan, waqtiga ayaa wax walba wato, ha ku kadsoomin waqtiga.
Haddii jawaab celintaydu kugu xumaato, ogow in waydiintaada iyo fal celintaada aan dhibsaday.
10-Waa wada Dhiil!!!
Mid ayaan ogahay, in Soomaaliya Qof walba uu dibadda qolo ugu xiran yahay mushaarna uu kaga qaato faafinta iyo mabaadii’da kuwa dhaqaalaha ugu deeqo.
hadaba maxaa madaxda kaliya loo eedayaa, haddii Abwaanadii, dhaqaatiirtii, Warbaahiyayaashii, aan dhahaba dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ka koobantahay mid walba qolo u shaqaynayo?
11-Xor ma nihin.
Xor ma nihin, xigasho ku nool ayaanu nahay, xiisa badan iyo xasadna xabadka ayuu inoo fadhiyaa, xabaalaha in aan gaarno mooyee, xeer kale oo nakala qabanayo ma jiro.
12-Sawiro xaalad fiican
Mararka qaar sawiro xaalado qurux badan oo aan kugu dhicin, iska dhaadhici in ay xaaladdaas quruxda badan kusoo martay iyada oo kusoo marin.
Waa hubaal in uu qalbiga qaboobayo haddiiba loo sheego wax uu ku qaboobo yuusanba haysninee.
Hadaaba xuntahay, xumaan falana tahay, wax dan ah kuuguma jirto in aad sii noolaato, maxaa yeelay, noloshaada wax aan Xumaan iyo Cadaab ahayn kuuma sii kordhiso.
14-Baaq iyo Buuq
inta aan wax garanayay baaq ayaan maqli jiray, buuqna waa sii socon jiray!!!!
wax kasta oo ku dhiba, ka fogaantooda waa kuu farxad.
16-Horey u soco
Waxay dhaheen in aad wax dib u hagaajiso waxaa ka qiima roon in aad wax cusub dib u bilowdo, su’aashuse waxay tahay naftaada dib ma u bilaabi kartaa oo wixii ka khaldamay xalay dhalay maka soo qaadi kartaa? dib u hagaajin waad isku samayn kartaa balse dib iskuma bilaabi kartid.
Aniga waxaan dhihi lahaa dib isku hagaaji balse dib ha iskusoo bilabin, maxaa yeelay nolosha waa mid horey u socota in aad sidaas kula socotana waa habka hagaagsan ee nolosha, nolosha oo horey u socoto gadaal u soco ma ahan wax wanaagsan oo maanka gali kara.
Ma ogtahay in kuwa Indha la’ba ay quruxdooda arki karaan?
18-Dibu ug noqo.
Si aadan u dhiman laba jeer, dib ha ugu noqon qof ku qayaanay.
19-Qalbi caafimaad qaba.
Marka aad garan wayso sida aad u sifayso ama u qeexdo dareenkaaga, sidoo kalana xaaladaha qaar ee aan wanaagsanayn aad naftaada ka difaacdo, markaas ogow in aad leedahay qalbi ka caafimaad qaba dunida qurunsan.
Tiiraanyada waa midda soo xaadiriso dareenkaga dhabta ah, farxadduse waa mid la timaado dareenka dhalanteeda iyo kan abuura murugada
21-Dhabta ku noolow
Dhabta waa in aad ku noolaataa, farxad iyo murugaba midda ay rabto ha kuu yaboohdee, balse in aad dhabta ka cararto oo dhalnteed ku noolaato ma ahan mid kuu horseedi karta ama ku siin karta waxa ay dhab u dalbanayso naftaada.